विराटनगरमा लोकप्रिय बन्दै बिरयानी - नेपालबहस
विराटनगरमा लोकप्रिय बन्दै बिरयानी
अन्जना पराजुली : रासस
| १३:४८:३२ मा प्रकाशित
२६ फागुन,विराटनगर । पछिल्लो समयमा विराटनगरमा बिरयानी खाने प्रचलन बढेको छ । कुनै समयमा यहाँका मानिसहरु भारतको दिल्ली, फारबिसगञ्ज, लखनाउ जाँदा खाने बिरयानी यहीँ खान पाउँदा दङ्ग छन् ।
केही वर्ष पहिले यहाँका मानिसहरु काठमाडौँ जाँदा बागबजारस्थित पाकिजा होटेलमा बन्ने बिरयानी खाएर साबुनले हात पनि धुँदैनथे, किनकी साबुनपानीले हात धुँदा बासना पखालिन्थ्यो । यही बासनाका लागि पनि मानिसहरुले हात साबुनले धुँदैनथे । काठमाडौँको बागबजारस्थित पाकिजा होटेल बिरयानीका लागि प्रख्यात मानिन्छ र यसका पारखीहरु काठमाडौँ जाँदा एकपटक बिरयानीको स्वाद लिन पछि पर्दैनन् ।
खास गरेर मुस्लिम समुदायमा अत्यधिक मन पराउने बिरयानी अहिले सबै समुदायका मानिसका लागि लोकप्रिय भएको छ । आ–आफ्ना जन्मदिन मनाउँदा युवायुवती बिरयानी हाउस रोज्छन् र बिरयानी खाएर एकले अर्कालाई शुभकामना दिन्छन् । बिरयानी हाउस युवायुवतीका लागि भेटघाट गर्ने स्थलका रुपमा पनि विकसित हुनुले यो व्यापारमा लाग्ने मानिस पनि उत्साहित भएका छन् ।
प्रदेश नं १ को राजधानी विराटनगरमा विभिन्न खानाका परिकारहरु पाइने होटेलहरु सञ्चालनमा आएको भए पनि अहिले बिरयानी हाउसहरु पनि एक दर्जनभन्दा सञ्चालनमा आएका छन् । शुरुशुरुमा ठूल्ठूला रेस्टुरेन्ट (भोजनालय) मा मात्र पाइने बिरयानी अहिले सर्वसाधारण नागरिकको पनि पहुँच पुगेको पाइएको छ । पहिला धनीले खाने यो परिकार अहिले विपन्न र गरीब मानिसका लागि सहज भएको छ ।
खासगरेर कोभिड–१९ ले महामारी रुप लिएपछि रोजगार गुमाएका युवाहरु यस पेशामा आकर्षित भएकाले बिरयानी हाउसको सङ्ख्या उल्लेखनीयरुपमा बढेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा विराटनगरमा एक दर्जनभन्दा बिरयानी हाउसहरु सञ्चालनमा आएका छन् । सञ्चालित बिरयानी हाउसको आ–आफ्नै शैली छन् । कोही चिकेन त कोही मटन बिरयानी बनाएर ग्राहकलाई सन्तुष्टि प्रदान गरिरहेका छन् । बिरयानी हाउसबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएपछि उनीहरुले यसलाई नै व्यवसायको मुख्य स्रोत मानेका छन् ।
विराटनगरका सबैभन्दा पुराना होटेल गुद्री बजारस्थित बिरयानी प्वाइन्टले ४० वर्षदेखि होटेल व्यवसाय गर्दै आएको छ भने लगभग दुई वर्षदेखि बिरयानी बनाउन थालेपछि सुक्न लागेको व्यापार पुनः मौलाएको सञ्चालक मक्सुद खानले जानकारी दिए । उनले बनाउने बिरयानी ग्राहकहरुको इच्छाअनुसार हुन्छ । ग्राहकले जस्तो रुचि राख्छन्, त्यस्तै बिरयानी बनाएर सेवा गर्न पाउँदा खुशी लाग्ने गरेको सञ्चालक खानको भनाइ छ । यो बिरयानी हाउसमा मुस्लिमहरुको साप्ताहित प्रार्थनाको दिन शुक्रबार अत्यधिक बिक्री हुन्छ ।
शुक्रबार भ्याइनभ्याइ हुन्छ, अरू दिन त लगभग ५० देखि ६० जना ग्राहक बिरयानी खान आउने गरेको खानले जानकारी दिए । उनले प्रतिप्लेट रु १०० को दरले चिकेन बिरयानी बेच्दै आइरहेको बताए । परिवारका सदस्यबाट सेवा गराउने यो बिरयानी हाउसले महिनामा राम्रै आम्दानी हुने गरेको खानको भनाइ छ ।
यस्तै विराटनगर महानगरपालिका–९ ट्राफिक चोकमा रहेको द रोयल बिरयानी हाउस पनि एक वर्षअघि सञ्चालनमा आएको छ । विदेशबाट बिरयानी बनाउने सीप सिकेर स्वदेशमै बिरयानी हाउस सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले अमिर लिम्बूले सञ्चालन ल्याएको यो बिरयानी हाउस सञ्चालन गर्न करीब रु १५ लाख खर्च भएको सञ्चालक लिम्बूले जानकारी दिए । उनले मटन र चिकेन दुवै प्रकारका बिरयानी बनाउछन् । चिकेनको भन्दा मटन बिरयानीको दाम अलिक बढी लाग्ने गरेको सञ्चालक लिम्बूले भने । उनी भन्छन्, “एकपटक बिरयानीको स्वाद पाइसकेका मानिसले फेरि कहिले खाने प्रतीक्षा रहन्छ, यो नै हाम्रो सुखद र खुशीको कुरा हो ।”
यस्तै विराटगर भाटभटेनी सुपरमार्केट छेउमा रेड चिल्ली बिरयानी हाउस सञ्चालन गर्दै आएका राजु खानले आफूले तीन वर्षदेखि यो व्यवसायबाट सन्तुष्ट छन् । उनी भन्छन्, “रु पाँच लाखमा सञ्चालनमा ल्याएको यो बिरयानी हाउसबाट राम्रै आम्दानी हुन्छ, खासगरी उत्सव, पर्व र बिदाको दिन बिरयानी खान आउने मानिसहरु बढी हुन्छन् ।” शुरुआती दिनमा कतिपय मानिसलाई बिरयानी भनेको थाहासमेत नहुने गरेको उनले बताए तर अहिले हरेक मानिसको रोजाइमा बिरयानीको स्वाद मन पर्न थालेको छ । बच्चादेखि वृद्धसम्मले बिरयानी एकदमै मन पराएर खाने गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले आफू मुस्लिम समुदायमा जन्मेकाले बिरयानी बनाउन अन्त कतै जान नपरेको बताए । आफ्नो घरमा आमाले बिरयानी पकाउने भएकाले आफूले आमाले बनाएको हेरेर नै बिरयानी बनाउन सिकेको जानकारी दिए । उनले बनाउने ‘दम’ बिरयानीमा ४८ प्रकारका मसलाहरु मिसाइएको हुन्छ । भारतको हैदरावादमा मात्र पाउने ‘दम’ बिरयानी बनाएर ग्राहकलाई आफ्ना व्यवसायतर्फ आकर्षित गराउन सफल भएका छन् । विराटनगरमा पाइने बिरयानी निकै सस्तो भएकाले जो कोही पनि हप्तामा एक दिन बिरयानी खान योजना बनाइहाल्छन् ।
उनका रेस्टुराँमा मटन र चिकेन दुवै किसिमको बिरयानी खान पाइन्छ । उनी भन्छन्, “पसलमा भीड लाग्ने गरेकाले दुईजनालाई रोजगार पनि दिएको छु र यो पेशाबाट सन्तुष्ट छु ।” उनले प्रतिप्लेट मटन बिरयानी रु १५० र चिकेन बिरयानी रु ८० दरले बेच्ने गर्छन् । भाटभटेनी सपिङमलमा खरीद गर्न आउने ग्राहकहरु एकपटक आफ्नो रेस्टुराँमा पनि छिर्ने गरेकाले व्यापार राम्रो चलेको उनी बताउछन् ।
यस्तै विराटनगर मुख्य बजार ट्राफिक चोक छेउमा चार महिनादेखि सञ्चालनमा आएको अरबियन बिरयानी हाउसका सञ्चालक अज्नान अलीले हालै आफूले रु आठ लाख लगानी गरेर यो व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिए । यहाँ बिहान १० देखि राति ९ बजेसम्म बिरयानी खान आउने ग्राहकको भीड लाग्ने गर्दछ । भर्खर शुरुआत गरेको भए पनि व्यापार राम्रो हुने गरेको उनले जानकारी दिए । उनले ग्राहकले माग गरेमा उनीहरुको घरसम्म पु¥याउने व्यवस्थासमेत रहेको बताए । यहाँ चिकेन प्रतिप्लेट रु १५० का दरले बिक्री हुने गरेको छ ।
ठाउँ सफा र कामदार पनि सफसुग्घर भएर बस्नाले यहाँ अन्य ठाउँको भन्दा फरक देखिएको छ । उनले बिरयानी बनाउनका लागि लखनउबाट तालीम लिएर आएका कुकलाई रोजगार दिएका छन् । ग्राहकलाई सेवा दिने अन्य पाँचजना सहयोगी पनि राखिएको छ । यहाँ बनाइने बिरयानीमा थकाली बास्मती चामल र अन्य मसलाहरु प्रयोग गरिने भएको फरक स्वादको अनुभूति गर्न पाइन्छ । अरबियन बिरयानी हाउसमा बिरयानी खाना आएकी विराटनगरकी सीमा यादव भन्छिन्, “यहाँको बिरयानी मलाई निकै स्वादिष्ट लाग्यो, म यो हाउसको नियमित ग्राहक हुँ, बिरयानी खाएको मज्जा नै बेग्लै छ ।”
सरकारले बुटिक र डिलक्सलाई तारे ‘स्टार’ होटलको मान्यता दिने २ महिना पहिले
अठार अर्ब राजस्व संकलन ३ महिना पहिले
प्रदेश नं १ मा १०० जना काेराेनामुक्त ४ महिना पहिले
दुई वर्षमा हुलाकी राजमार्ग सञ्चालनमा आउने ४ महिना पहिले
बर्षाले विराटनगरका २५ सय घर डुबानमा ७ महिना पहिले
२३ वर्षअघि सामूहिक लगानीमा किनेको डोजर कवाडी बन्दै ३ मिनेट पहिले
आईपीएलः आज चेन्नई र राजस्थानको म्याच भिड्दै, यस्तो छ सम्भावित प्लेइङ–११ ७ मिनेट पहिले
मष्टा पूर्ण खोप सुनिश्चितता गाउँपालिका घोषणा ११ मिनेट पहिले
५ अर्ब २० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल विक्री गर्दै राष्ट्र बैंक १६ मिनेट पहिले
पर्यटकलाई पाँच स्थानबाट पाटन अवलोकन गराइने १८ मिनेट पहिले
सिभिल बैंकका सीईओ गुरुङको राजीनामा स्वीकृत २२ मिनेट पहिले
महाधिवेशन सार्नेबारे राप्रपाको बैठक आज बस्दै २४ मिनेट पहिले
‘काभ्रे भ्याली’ स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि एक अर्ब बजेट २६ मिनेट पहिले
शहरी क्षेत्रको विद्यालय बन्‍द गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय २९ मिनेट पहिले
विद्यालयको कोषवृद्धि अभियानमा ५० लाख सङ्कलन ३४ मिनेट पहिले
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको २५ हजार कित्ता शेयर लिलामी भर्ने आज अन्तिम दिन ३८ मिनेट पहिले
९३ वर्षको उमेरमा पूर्व मन्त्री सुवालको निधन ४० मिनेट पहिले
कारागारकै शौचालयमा कैदीबन्दीले गरे आत्महत्या ! ४४ मिनेट पहिले
इच्छाकामनाको करिब साढे २०० घरधुरीमा बिजुली बले ४७ मिनेट पहिले
बेगनास तालमा पर्यटकको पर्खाइमा डुङ्गा १९ घण्टा पहिले
माओवादीको स्थायी कमिटी भोलि २१ घण्टा पहिले
बोक्सीको आरोपमा महिलालाई कुटपिट गरी जबर्जस्ती मलमूत्र खुवाउने नियन्त्रणमा २० घण्टा पहिले
भारतमा कोरोनाबाट एकै दिन १५०१ जना संक्रमितको मृत्यु २३ घण्टा पहिले
पाकिस्तानमा प्रदर्शनलाई निस्तेज पार्न सामाजिक सञ्जाल बन्द ३ दिन पहिले
‘व्यवस्था परिवर्तन गरी राजसंस्थालाई स्थान दिइयोस’– रिता माझी ३ दिन पहिले
नायिका प्रियंका र ऋचापछि आमा बन्दै गरिमा ५ दिन पहिले
इरानमा परमाणु केन्द्रमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण ७ दिन पहिले
सकियाे सरकार र थरुहट संघर्ष समितिको पहिलो वार्ता ! ३ हप्ता पहिले
पशुपति क्षेत्रका नौ शक्तिपीठमा आज राति पूजा गरिने १ हप्ता पहिले
मङ्सिरी विद्यालय : दिसा, पिसाबका लागि जङ्गलमा जानुपर्ने बाध्यता छ ७ दिन पहिले
नेपाल र ओमानका विश्वविद्यालयबीच सहकार्य गर्ने सहमति ४ हप्ता पहिले
तपाईको आजको राशिफल कस्तो छ ? १ हप्ता पहिले
इन्द्रावतीमा प्राविधिक शिक्षा पढ्नेलाई छात्रवृत्ति २ महिना पहिले
सिमरामा एटीआर–७२ जहाजको उडान हुने ८ महिना पहिले
अब डोकोको सहारामा पिठ्युँमा बिरामी बोक्ने दिन गए ४ महिना पहिले